Sunflower Powder - Mugadziri Fekitori
Iyo sunflower powder (chakasimba chinwiwa) chakapfuma kwazvo mune zviri mukati meamino acid uye vhitamini E, A, C mushure mekudzora uye yehupenyu enzymolysis. Sunflower powder (chakasimba chinwiwa) chinonyanya kuve chakaumbwa nema micro-mamorekuru ane hama mamorekuru mashoma asingasviki 1000u, iri nyore kutorwa nemiviri yevanhu uye ine yakakwira mashandisirwo mwero.
Sunflower upfu vhidhiyo
Sunflower upfu Magadzirirwo
Product Name Sunflower upfu
Chigadzirwa wega hupenyu Yakavhurwa kwemwedzi makumi maviri nemana
ruvara Yakachena kana yakajeka yero
Storage Temperature Chengetedza pakushambidzika kwemukati uye inofanirwa kuiswa munzvimbo inotonhorera uye yakaoma.
Mushure mekuvhura, idya nekukurumidza sezvinobvira kuchengetedza zvigadzirwa kubva kuunyoro uye kusangana.
APane Chikafu, chekuchengetedza zvine hutano chinowedzera, chikafu chinoshanda.
Chii chinonzi Sunflower powder?
Sunflower powder (chakasimba chinwiwa) chinowanikwa kubva kune sunflower poda, kuburikidza nenzira dzakawanda
senge kusarudzwa kwezvinhu zvakasvibirira, kubvisa, enzymolysis, kuomesa uye kurongedza, nezvimwe.
Iyo sunflower powder (chakasimba chinwiwa) chakapfuma kwazvo mune zviri mukati meamino acid uye vhitamini E, A, C mushure mekudzora uye yehupenyu enzymolysis. Sunflower powder (chakasimba chinwiwa) chinonyanya kuve chakaumbwa nema micro-mamorekuru ane hama mamorekuru mashoma asingasviki 1000u, iri nyore kutorwa nemitumbi yevanhu uye ine yakanyanya kushandiswa chiyero.
Ndezvipi zvakanakira Sunflower powder?
Inobatsira kudzora uric acid uye kuwana gout kuvandudzwa
Mazhinji emishonga iripo yekurapa gout uye hyperuricemia mishonga yemakemikari, iyo ine chepfu yakawanda uye mhedzisiro. Naizvozvo, vanowedzera uye nevatsvakurudzi vakazvipira kutsvaga zvakasikwa zvinoshanda zvekurapa kwakanaka uye yakaderera chepfu kubva kune zvakasikwa zvirimwa. Zvinoenderana nekiriniki yekuongororwa kwemishonga yechinyakare uye nekuferefetwa kwazvino kwemishonga, sunflower ine dzakasiyana siyana zviitiko zvezvekurapa. Mune ongororo yezuva rezuva, zvakaonekwa kuti sunflower yakaburitsa inoderedza ropa uric acid zvemukati kune imwe nhanho uye ine chimwe chinodzivirira maitiro pane chiitiko che xanthine oxidase mune mbeva serum.
Tora chisingaperi prostatitis uye prostatic hyperplasia improved
Chisingaperi prostatitis ndechimwe chezvirwere zvakajairika pakati pevakuru nevakuru varume vezera. Vazhinji vevarwere vane zviratidzo zvakakura seyakaoma kuita weti, kudonha mushure mekuita weti uye kusuruvara kwemaoko ezasi. Sekureva kwemanyorerwo etsamba yezvokurapa, mwero wekupora wakasvika makumi masere kubva muzana (80%) pamusoro pevarwere vakamborapwa nehupfu hwemaruva. Prostatic hyperplasia zvakare chirwere chisingaperi chinowanikwa kune varume vakuru, chiitiko chayo chakakwira kupfuura 100%. Mushure mekunge varwere vadya maruva poda, pane chinovhiringidza mu glandular hyperplasia, kudzikira mu glandular vhoriyamu, uye kugadzirisa mune endocrine mutemo basa.
Ita kuti chiropa chiwedzere kuvandudzwa
Nyuchi mukume une maitiro akajeka pachidhakwa cirrhosis inokonzerwa nekunyanyisa kunwa doro, uye kugadzirisa chiropa mashandiro nekukurumidza sezvazvinogona.
Mhedzisiro pane yemoyo system
Ruva poda rakapfuma mavitamini uye mamwe flavonoid makomputa, ayo ane mhedzisiro yakanaka pakusimudzira kwesimba remusoro, nekudzivirira uye kurapwa kwe capillary permeability disorder, cerebral hemorrhage, retinal hemorrhage, hypertension, uye varicosity.
 Kudzidza paAnti-Gout uye Anti-hyperuricemia Chiitiko cheSunflower Musoro Kubvisa.
 Kudya nekuchengetedza hutano kunaka kwemukume.
 Pfupiso yePollen Nutrition uye Basa.